Item No .: MS-SS9
DOT waxay ansixisay 9 inch oo laydh madax wareega ah ee 2018+ Jeep Wrangler Moab Edition, naqshad gaar ah oo ka timid Morsun kaliya. Ku habboon Jeep Wrangler JL, Daabacaada Moo'aab, Gladiator 2020.
Our Jeep Wrangler MOAB Edition waxay horseed u tahay nalalka hore waxay si weyn u wanaajin kartaa fogaanta saadaalinta iftiinka iyo guud ahaan aragga, waxay la yimaadaan 4 nooc oo beam ah oo ay ku jiraan beam sare, beam hooseeya iyo drl cad iyo calaamado leexasho amber ah. Guryaha aluminiumka ah ee nashqadeysan ee naqshadeynta leh ayaa leh sifooyinka qaboojinta hufan, xoogga weyn iyo culeyska fudud, daxalka iyo naxdinta, guryeynta shaabadaysan iyo IP67 biyuhu. Nalalka hore ee Our hogaanka for Jeep Wrangler MOAB waa DOT SAE la ansixiyay taasoo sharci ku ah wadada. Nalalkan hore ee 2018+ Jeep Wrangler Way fududahay in la rakibo, ku habboon 2018+ Jeep Wrangler JL, 2018-2019 Jeep Wrangler Moo'aab iyo 2020 Jeep Gladiator JT.
Faahfaahinta 2018 Jeep Wrangler Moab Edition Led Iftiinka Hore
Number Model MS-SS9
Gaadhi Sameeyaha Jeep
model Wrangler JL, Moo'aab, Gladiator
Dhererka 249mm / 9.80 inji
width 242mm / 9.53 inji
qoto 173mm / 6.81 inji
Power 60W @ Laydhka Sare, 30W @ Beam Sare
Qulqulka Luminous 4500lm @ Laydhka Sare, 2000lm @ Laydhka Hoose
Sawirro badan oo Led nalka hore ee Jeep Wrangler Moo'aab
feature ee Jeep Wrangler MOAB waxay keentay nalka hore
1. MUUQAALKA SARE
Wuxuu kordhiyaa soosaarka iftiinka ee nalalka LED-ka baabuurka si loo kordhiyo muuqaalka waddada. Iftiinka iftiimaya wuxuu hagaajiyaa badbaadada markaad baabuur wadid habeenkii.
2. Naqshad GAAR AH
Si ka duwan laydhka kale ee hore, waxa jira muraayad hufan oo ku taal lakabka sare ee laydhka hore, iyo qayb ka mid ah muraayadaha qurxinta ee quruxda badan ee dhexda oo u eg mid sabeynaya. Ma saamaynayso dhalaalka oo keliya balse waxay sidoo kale ku daraa shakhsiyad gaar ah gaadhigaaga.
3. DHISMAHA REER
Waxa laga sameeyay guryaynta aluminium-ka-dhimatay iyo muraayadda-iska-hortagga oo sii ahaan doona mid cusub oo aan sii luminayn muddo dheer. Ilaa 50,000 saacadood oo Cimrigu Shoogga iyo iska caabinta daxalka.
Gaar ahaan daloolka neefsashada ee dhabarka si loo sii daayo qoyaanka, Guryaha aluminiumka ah ee leh kulaylka wax ku ool ah, ka dhig inay sii dheeraadaan; 100% la xidhay. Heerka boodhka iyo biyuhu-ilaalinta IP67 waxay ku shaqayn kartaa xaalad kasta oo adag.
5. FUDUD in lagu rakibo
Xirmada iftiinka hore ee LED waxay ku rakibtaa iyadoo la isticmaalayo qalabka wax lagu dhejiyo ee asalka ah iyo fiilooyinka iftiinka hore. Ku xidh oo ku ciyaar xidhiidhiyaha warshada iyada oo aan lahayn wax-is-dhaafsi ama xargaha.
waayo, Jeeps Wrangler JL 2018 2019 2020 2021
waayo, Jeep Wrangler Ciyaaraha 2018 2019 2020 2021
waayo, Jeep Wrangler Saxaraha 2018 2019 2020 2021
waayo, Jeep Wrangler Rubicon 2018 2019 2020 2021
waayo, Jeep Wrangler MOAB 2018 2019
waayo, Jeep Gladiator 2020 2021